Vhura uye zvirongwa zviri nyore kugadzira mavhidhiyo. Chikamu chechipiri | Linux Addicts
Vhura uye zvirongwa zviri nyore kugadzira mavhidhiyo. Chikamu chechipiri
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Multimedia, Zvirongwa, Linux software
Mauri Nyaya yapfuura tainge tatanga kucommenter uRondedzero diki yezvirongwa zvinobatsira kune avo vanoda kutanga mukugadzira vhidhiyo. Maitiro edu anobva pakureruka pane kuita. Iwo mapurogiramu ane yakaderera chaizvo kudzidza curve.
Mune ino kesi isu tichataura nezve mamwe emazita aripo ekugadzirisa vhidhiyo.
1 Vhura uye zvirongwa zviri nyore kugadzira vhidhiyo
Vhura uye zvirongwa zviri nyore kugadzira vhidhiyo
Iyo vhidhiyo yekugadzirisa software tIyo ine mabasa ekutanga ekucheka, kujoinha, kusanganisa uye kupatsanura odhiyo, vhidhiyo uye mufananidzo mafaera. Iyo yakanyanya kukwirisa inosanganisira kugona kugadzira mazita uye kubatanidza mhedzisiro.
Ese mapurogiramu aya haana-mutsara vhidhiyo edhita. Izvi zvinoreva kuti iwo ekutanga maodhiyo nemavhidhiyo midziyo pakavakirwa mavhidhiyo matsva anoramba asina kuchinjika.
Pese panogadziridzwa kana shanduro yekupedzisira inoitwa, izvo zvinoratidzwa zvinovakwa patsva kubva kune yekutanga zvinyorwa uye editing mirairo inotsanangurwa nechirongwa.
Imwe temu yatinofanira kutsanangura ndeye kududzira.
Vhidhiyo rendering ndiyo nzira iyo komputa inoshandisa nhevedzano yemirairo yepreset kumafaera emultimedia kushandisa ruzivo irworwo kugadzira uye kuratidza kutevedzana kwemifananidzo nekukurumidza zvekuti ziso rinoona kufamba. Maitiro ekupa anogona kuguma nefaira rakafanana mufomati uye zvirimo, zvakafanana mufomati kana zvirimo, kana kugadziridzwa muzvikamu zvese.
Vhidhiyo codec isoftware inodzvanya nekudzikisa vhidhiyo yedhijitari. Muchirevo chekumanikidza kwevhidhiyo, codec ipfupi ye encoder uye decoder.
Iyo compression inoshandiswa necodec inowanzorasikirwa, chii kana uchimanikidza vido rumwe ruzivo rwekutanga vhidhiyo runobviswa. Mhedzisiro yeizvi ndeyekuti kana maitiro akadzoserwa, vhidhiyo isina kudzvanywa ichave yemhando yakaderera pane yepakutanga isina kudzvanywa vhidhiyo nekuti hapana nzira yekudzoreredza data rakadzimwa.
Kazhinji, vagadziri vevhidhiyo vanogumira pakupa mushandisi interface kune imwechete yakavhurika sosi masisitimu. Aya masisitimu maseti emaraibhurari ekushanda nemifananidzo, odhiyo uye vhidhiyo.
Zviviri zvezvinonyanya kuzivikanwa ndezvi:
GStreamer: Yakavakirwa pabasa reOregon Graduate Institute, yakagadzirirwa kuita kuti zvive nyore kunyora zvikumbiro zvinobata odhiyo, vhidhiyo, kana zvese. Ichi chimiro chinosanganisira zvinhu zvekuvaka mutambi wenhau anogona kutsigira akasiyana siyana mafomati, anosanganisira MP3, Ogg/Vorbis, MPEG-1/2, AVI, uye Quicktime pakati pemamwe akawanda.
FFmpeg: Iyo dhizaini yekushanda nemafaira emultimedia anogona kushandiswa kudhidha, encode, transcode, kusanganisa, kupatsanura, kuyerera, kusefa uye kutamba angangoita ese midhiya mafomati. Inopindirana nemhando dzekare uye dzemazuva ano.
Chirongwa ichi isiri-mutsara vhidhiyo mupepeti, iyoe inokutendera kuti uise zvinoonekwa kuvhidhiyo uye uzvishandure kune akasiyana mafomati. Avidemux inotipa mukana wekubvisa ruzha kubva muvhidhiyo faira uye kuisanganisa neimwe.
Mafomati mazhinji anozivikanwa anotsigirwa kune subtitle processing.
Chirongwa ichi chiripo mumatura eiyo huru Linux kugoverwa mukuwedzera kuve neshanduro dzeWindows neMac.
Yakagadzirirwa kuve mupepeti wevhidhiyo wekugovera zvichienderana neGNOME desktop, inogona kushandiswa nedzimwe nharaunda nekuda kwe Flatpak packet format. Haisi kuwanikwa kune mamwe masisitimu anoshanda, asi inowanikwa mumarekodhi eiyo huru Linux kugovera.
Iyo inozvirumbidza yekuve yakakodzera kune vese nyanzvi uye amateurs uye Iine intuitive interface. Kusiyana nemamwe maapplication, kugadzirisa hakubvi pamafuremu asi pachinzvimbo chemisoro yekutamba.
Unogona kushanda nemafomati ese anotsigirwa neGStreamer.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vhura uye zvirongwa zviri nyore kugadzira mavhidhiyo. Chikamu chechipiri
Daniel O. akadaro
Yakanakisa yemahara uye yakavhurika sosi vhidhiyo mupepeti welinux ndeye SHOTCUT. Yakareruka, inokurumidza, haiputsi kana uchigadzirisa mafaera makuru. Ndakasvika pamhedziso iyoyo mushure mekuedza vangangosvika gumi vapepeti vakasiyana, imwe neimwe iine orthopedic, inononoka kana izere netsikidzi.
Mhinduro kuna Daniel O.
Pakati peakareruka, iyo yaunotaura ndiyo yakanyanya kunaka, asi kana iwe uchida chimwe chinhu chidiki hunyanzvi muGNU/Linux unofanirwa kuenda kuCinelerra GG, inova ndiyo yega yemahara, yemahara uye yehunyanzvi sarudzo iyo vashandisi veiyo OS yambotaurwa. have.
Offpunk CLI web browser iyo inogona kushanda kunze kwenyika